Nzira yekutenga sei muhombodo? | Ehupfumi Zvemari
Kupinda mumisika nemazvo ndechimwe chezvinangwa zvemumwe muzvinabhizimusi uye nekuda kweizvi ivo vanofanirwa kuronga zano rakanyatsorongwa pasingasarirwe fungidziro. Iko chikamu chakakosha kwazvo ndechekutenga mune yakakurudzirwa mamiriro kune zvido zvevashandisi vemusika wemasheya. Hazvishamise kuti nehurongwa uhu uchave nerwendo rurefu iwe rwawakawana kuzadzisa zvinangwa zvako zvaunoshuvira munyika yemari uye kunyanya musika wemasheya.
Mudhara investor anofanira kuendesa vamwe nhungamiro yakasimba kuita yako yakavandudzwa nzira yekutenga. Mupfungwa iyi, nongedzo dzakareruka dzatichazopa pazasi dzinogona kubatsira zvakanyanya, dzinozivikanwa nekuve nyore kwazvo kutevedzera. Semuenzaniso, iwo atinongedzera pazasi peizi ruzivo.
Parizvino pane mamwe maitiro ari mune ino mamiriro, mushure meiyo IBEX 35 yakave iri padyo padyo padanho mu iwo masere masere. Hazvishamisi kuti ndeimwe yesarudzo dzakajeka dzavanotarisana neichi chinzvimbo vachitora netariro yakakura. Pane zvinopesana, kusendamira kumatanda ayo achiri mu downtrend kunogona kuisa njodzi dzakakomba dzavanosimudza panguva inotevera yekutengesa zvikamu. Nenjodzi yekuwedzera kurasikirwa muzvako chengetedzo kana portfolio yekudyara.
1 Kutenga: pamutengo wekutsigira
2 Securities dzakarova pasi
3 Kupinda muzvikamu zvakanakisa
4 Hukuru mukana wekutenda
5 Kurudziro kubva kune broker
6 Kubhejera kwakachengeteka
7 Index kuongorora
8 Chii chekuita nehurema?
9 Chinja izwi rekudyara
10 Gadzirira kurasikirwa
Kutenga: pamutengo wekutsigira
Kuburikidza nemagrafu iwe unogona kutarisa kukosha kuri mune ino mamiriro, kuti uzotengesa gare gare mairi nzvimbo yakaoma, kana zvakare muchiitiko chekuti zvitsigiro zvakaputswa. Iyo ndeimwe yemaitiro akareruka anoshandiswa mumusika wemasheya, kunyange hazvo izvi zvichikosha kuti urambe uchiteedzera panguva pfupi shanduko yemitengo yevanogona kukwikwidza vanogona kunge vari chikamu chechengetedzo portfolio.
Securities dzakarova pasi
Icho chimwe chezviitiko zvakanakira chero mushambadzi anofanirwa kubata nekutenga, kunyangwe iine dambudziko rakakomba zvekuti zvinonetsa kuti vatengesi vatengese izvi. pfungwa chaiyo uye, ivo vanofanirwa kubatsirwa neongororo dzinoitwa nevakuru vevamiririri kana nevaichinja zvemari, izvo zvinoburitswa mune yakasarudzika midhiya.
Kupinda muzvikamu zvakanakisa
Imwe sarudzo iri kunakidza ndeyekubheja pamasheya anoumba zvikamu zvemusika wemasheya zvine tarisiro dzakanaka dzekukura kwemwedzi iri kuuya uye dzinogona kubatsirwa nekuita kwavo pamusika wemasheya, kunyangwe pamusoro pezvikamu zvavo zvakajairika uye neavhareji yakajairwa.
Enda kune yako yehunyanzvi uye yakakosha ongororo: izvi ndizvo zvinonyanya kupihwa mapeji makuru webhu nyanzvi uye inopa yakanyanya kukosha dhata yekutanga kutora chinzvimbo mune imwe kukosha iyo inopa yakanaka stock stock uye business ratios. Kunyangwe paine vateveri veumwe neumwe wavo, kusanganisa zvese kuongororwa ndiyo pasipoti yakanakisa yekutenga zvakanaka.
Hukuru mukana wekutenda
Iri zano raizosanganisira kutsvaga izvo kuchengetedzeka izvo zviri kure kure nemutengo wavo, uye nekudaro, vane huwandu hukuru hwekuonga. Unogona kutsvaga izvo zvakanyorwa ne dhisikaundi inopfuura 20% kana 30% pamutengo wavo wakapihwa nevamiriri vezvemari, kunyangwe vachiziva kuti mune dzimwe nguva havatombosvika pamutengo iwoyo kana kudzikiswa mukuwongorora kunotevera
Kurudziro kubva nevaichinja
Vamiririri vezvemari vanogara vachimisikidza tsika dzakakodzera kupfuura vamwe kuti vatenge zvavari, zvichitevedzwa zvakanyanya nechikamu chikuru chevashambadziri, kunyangwe zvichikanganisa kuti pane dzimwe nguva fungidziro hadziwanikwe nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Imwe neimwe bhuroka gadzira modhi stock portfolio iyo inogona kuteverwa nevatengesi. Iwe unogona zvakare kuteedzera chaiyo portfolio kuburikidza nemishumo iyi, nenzira yekudzivirira, usati wapinda mumusika.
Mune ino kesi, kune vanoita mari ye imwe nhoroondo yekudzivirira Iyo sarudzo inogona kupfuura nemumapazi kana makambani anoratidzira chengetedzo huru, ndiko kuti, kusarudza iwo maitiro anochengetedza zvakanyanya: zvishoma zvisingachinjiki, zvakavimbika, zvakatsiga mumitengo yazvo uye zvinogovera zvikamu pagore. Sarudzo yezano iri inozoitirwa kutora chinzvimbo chakanangana nepakati kana refu, kwete zvezviitiko zvinoitwa pazuva rimwe chete kana kunyange kwemavhiki mashoma kana mwedzi.
Kuti uone nguva yakakodzera yekudyara, hazvingarwadzi kuongorora mamiriro eruzhinji rweindekisi yatichatora nzvimbo, kungave kwenyika kana kwepasi rose. Ichapa vimbiso huru mumusika wega wega kubheja, pamwe nechinhu chinoshanda chebasa rekuzadzisa zvinangwa zvedu.
Maitiro ekudzivirira: Pane kupokana, pane akateedzana enongedzo, ayo nekuda kwekuita kwavo kunopokana, haafanire kushandiswa kana kufambisa mari muzvikwereti uye, izvo zvinokuvadza zvakanyanya zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuchengetedza zviito izvi mupfungwa kuti zvirege kuwira mazviri uye kuti zvirege kuyera pundutso yemari yatinoshandisa. Izvo zvinokonzeresa kuguma mukuchengetedza munzvimbo dzese dzakatorwa nevashandisi vemusika wemasheya.
Tenga kuti utenge, ndiko kuti, sarudza chengetedzo zvisinei neiyo technical chinhu kana zvakakosha izvo zvaunazvo munguva idzodzo. Inotungamira mune dzakawanda zviitiko kune zvisingadiwe mhedzisiro.
Pinda mumusika mukati Nguva dzepamberi uko mutengo wekutenga unogona kutora nguva yakareba kuti usvike. Ndoizvo zvinonzi zvakashata kuti "zvakasungirirwa".
Tora kutorwa nemazano kwete chaizvo chinangwa kana mapato anofarira anogona kuvhiringidza muzvinashawo mune zano rake rekupinda mumisika yemasheya.
Kuisa mari mumatanda ari mune yakasarudzika bearish maitiro, nekutenda kuti kwavo kupora kuve munguva pfupi. Kunze kwekunge iwo musika uchipa pachena zviratidzo zvekutenga, zvirinani kurega kubva kwavari.
Uye, kutariswa kwakasarudzika nemitengo inova chinhu chekufamba kwekambani, runyerekupe kana shanduko mukugovana kwavo nekuti kana vachigona kukwirisa muzvikamu zvishoma zvemusika wemasheya, kudonha kunogona kutaurwa uye muzvikamu zvishoma vanogona kudonha zvine simba mumutengo wavo, aya marongero evashambadziri vane ruzivo vane ruzivo rwekudyara mukirasi ino yekuchengetedzeka nekuziva mushe maitiro avo.
Chii chekuita nehurema?
Mamiriro ezvinhu akaipisisa anogona kuunzwa kwauri mumari ndewekuti iwe uri mumamiriro ehurema. Hazvishamisi kuti zvichareva kuti kukosha kwezvinhu zvako pachako kunenge kuchikosha zvishoma. Asi kunyangwe zvese, iwe une nzira dzinoverengeka dzekugadzirisa iri dambudziko rakakomba rauinaro panguva ino. Nekuti zvirizvo, kuburikidza neyako mitsara yekuita ivo vachakwanisa kusimudzira kurasikirwa. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kudzosera hukama hwako nemisika yemari. Iwe unoda kuziva here kuti ndedzipi dzimwe nzira dzaunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi?
Kuremara: tora mukana wekudzoka. Kugadzirisa zvigaro iwe unogona kutora mukana wekudzoka kunoitwa mumisika yemari kugadzirisa zvigaro. Zvirinani zvinokubatsira iwe kutengesa masheya ne mutengo wakanakisa uye tanga kumwe kuvhiya nenzira dzakasiyana. Saka kuti nenzira iyi, iwe unodzikamisa hurema hwawakagadzira. Uye zvakare, izvo zvinokutendera iwe kuti ubve munzvimbo dzinonetsa zvikuru kune zvido zvako semudyari mudiki nepakati.
Chinja izwi rekudyara
Imwe nzira iwe yaunogona kushandisa ndeye kusiyanisa kureba kwako kwekugara. Kuenda kubva pfupi kusvika pakati nepakati kana kwenguva refu. Chinangwa chayo chichava chekuti mitengo yezviito inogona kudzosa iwo mazinga kwawakavhura nzvimbo. Iyo yakapusa maitiro uye iwe uchave unokwanisa kuunza iyo chero nguva. Nerombo rakanaka, mushure memakore akati wandei mune yako rondedzero iwe pakupedzisira unozogona tengesa masheya pane mari inowanikwa. Zvinogona kunge zvisina kuwanda, asi zvirinani kuti hauzorasikirwi nemari mumisika yemari. Sechinokanganisa chikuru, chokwadi chekuti zvinogona kutora nguva yakareba kusvika wavhara nzvimbo dzako. Nekuti iko kufamba kunogona kutora makore mazhinji. Kunyangwe kupfuura zvaunofunga pakutanga kubva munzira dzako dzepakutanga.
Iko kufamba kwekutanga chaiko iko kwauinako iko kushandiswa kwezvikamu kuenzanisa kurasikirwa. Kwete pasina, gore rega rega unenge uchichaja goho rakamisikidzwa uye rakavimbiswa rinogona simuka kusvika ku10%. Zvisinei nekushanduka kwemitengo yavo mumisika yemari. Kusvika padanho rekuti chiitiko chinogona kugadzirwa icho chinobatsira iwe uye kunyangwe uchirasikirwa neukoshi hwesimba rako rekudyara. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kushandisa zano mukati nepakati uye kwenguva yakareba kuti igone kushanda mukudzivirira zvaunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nzira yekutenga sei muhombodo?